Akụkọ Bible: Ndụ Ahụhụ Amalite - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
MGBE ha si n’ogige Iden pụta, Adam na Iv nwere ọtụtụ nsogbu. Ha rụsiri ọrụ ike iji nweta ihe ha ga-eri. Kama ịhụ osisi mara mma ndị na-amị mkpụrụ, ha hụrụ ọtụtụ ogwu na uke ndị na-eto gburugburu ha. Nke a bụ ihe mere mgbe Adam na Iv nupụụrụ Chineke isi wee kwụsị ịbụ ndị enyi Ya.
Ma nke ka njọ bụ na Adam na Iv malitere ịnwụ anwụ. Cheta na Chineke dọrọ ha aka ná ntị na ha ga-anwụ ma ha rie mkpụrụ nke otu osisi. Ha malitere ịnwụ kpọmkwem n’ụbọchị ahụ ha riri ya. Lee ka ha si bụrụ ndị iberibe ịjụ ige Chineke ntị!
Adam na Iv mụrụ ụmụ ha niile mgbe Chineke chụpụsịrị ha n’ogige Iden ahụ. Ihe ọ pụtara bụ na ụmụ ha ga-akakwa nká wee nwụọ.
A sị na Adam na Iv gere Jehova ntị, ha na ụmụ ha gaara enwe obi ụtọ ná ndụ. Ha niile gaara adị ndụ ebighị ebi n’obi ụtọ n’elu ala. Ọ dịghị onye gaara aka nká, rịa ọrịa, ma nwụọ.
Chineke chọrọ ka ụmụ mmadụ dị ndụ ebighị ebi n’obi ụtọ, ọ na-ekwekwa nkwa na otu ụbọchị, ha ga-adị ndụ ebighị ebi. Ọ bụghị naanị na ala niile ga-ama mma, kamakwa mmadụ niile ga-enwe ahụ́ ike. Onye ọ bụla nọ n’ụwa na mmadụ niile ọzọ ga-abụ ezigbo enyi, ha na Chineke ga-abụkwa enyi.
Ma Iv abụghịzi enyi Chineke. N’ihi ya, mgbe ọ mụrụ ụmụ ya, ọ dịghịrị ya mfe. O nwere ihe mgbu. Inupụrụ Jehova isi wetaara ya oké iru újú, í kweghị nke a?
Adam na Iv nwere ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị. Mgbe ha mụrụ nwa nwoke mbụ ha, ha kpọrọ ya Ken. Ha kpọrọ nwa nwoke ha nke abụọ Ebel. Gịnị mere ha? Ị̀ maara?
Jenesis 3:16-23; 4:1, 2; Mkpughe 21:3, 4.
Olee otú ndụ dịịrị Adam na Iv mgbe ha hapụrụ ogige Iden?
Gịnị malitere ime Adam na Iv, ọ̀ bụkwa n’ihi gịnị?
N’ihi gịnị ka ụmụ Adam na Iv ga-eji na-aka nká ma na-anwụ anwụ?
A sị na Adam na Iv rubeere Jehova isi, olee otú ndụ gaara adịrị ha na ụmụ ha?
Olee otú nnupụisi Iv si kpatara ya ihe mgbu?
Gịnị bụ aha ụmụ abụọ mbụ nke Adam na Iv?
Ole ndị ka ụmụaka ndị ọzọ ahụ nọ na foto a bụ?
Gụọ Jenesis 3:16-23 na 4:1, 2.
Olee otú ọnụ a bụrụ ala si metụta ndụ Adam? (Jen. 3:17-19; Rom 8:20, 22)
N’ihi gịnị ka aha ahụ bụ́ Iv, nke pụtara “Onye Dị Ndụ,” ji kwesị ekwesị? (Jen. 3:20)
Olee otú Jehova si chebara Adam na Iv echiche ọbụna mgbe ha mehiesịrị? (Jen. 3:7, 21)
Gụọ Mkpughe 21:3, 4.
Olee “ihe mbụ” ndị ị na-atụ anya ka e wepụ?